filazantsaramada – Page 3 – Just another WordPress.com site
FANASINA SY FAHAZAVANA
Perikopa: Matio 5:13-16
«Hianareo no fanasin’ny tany; fa raha ny fanasina no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy misy heriny hanaovana na inona na inona intsony izy, fa hariana any ivelany ka hohitsahan’ny olona. Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. » (Matio 5 :13-14)
Jesosy mampianatra ny mpianatra handray amin’ny teniny. Hianareo no fanasin’ny tany hoy Izy. Mahasira ny manodidina azy ka tsy tokony hatsatso. Raha izany, mbola fanasina ve izaho sy hianao sa matsatso? Sao dia sira tsy madio fa mifangaro loto. Raha tsy fanasina dia hariana any ivelany satria tsy misy heriny. Aoka hanaiky hosasàna amin’ny ràn’ny Zanak’ondry. «… Ireo no avy tamin’ny fahoriana lehibe, ary ny akanjony nosasany sy nofotsiany tamin’ny ran’ny Zanak’ondry.» (Apokalypsy 7:14b). Rehefa mandray ny tenin’Andriamanitra isika dia misy ny Mazava ao anatintsika. Lasa jiro mazava isika ka apetraka amin’ny fanaovan-jiro: mahazava ny manodidina. Raha tsy tanteraka izany dia mila mifona amin’i Jesosy isika ny amin’ny tokony handraisantsika marina ny Teniny. Tsy ny hifampitsara no ilan’i Jesosy ahy sy anao fa ny hanekentsika ho diovina amin’ny Ràn’i Jesosy ka hisitraka ny fahatsaràny: Jesosy no hitondra antsika amin’ny loharanon’ny ranon’aina. Amen. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 22 210 42/034 20 635 53/032 54 635 53/033 15 635 53/ E-mail : lhmmada@gmail.com Facebook: Feon’ny Filazantsara
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia marorata eto ambany. Misaotra indrindra.
Publié parfilazantsaramada novembre 6, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FANASINA SY FAHAZAVANA
« Ary rehefa nanakaiky Izy ka tonga teo am-pidinana amin’ny tendrombohitra Oliva, dia nifaly avokoa ny mpianatra maro be ka nidera an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay efa hitany ka nanao hoe: Isaorana anie ny Mpanjaka, Izay avy amin’ny anaran’i Jehovah. Fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin’ny avo indrindra. » (Lioka 19:37,38)
Ny Filazantsara dia Teny soa mahafaly, Mamelombelona ny fanahy. Mahatoky, mahahendry ny kely saina, mahitsy, irina noho ny volamena, mamy noho ny tantely. Manazava ny mpanompon’i Jehovah ny Filazantsara. Lehibe ny valin’ny fitandremana ny Filazantsara. Feno fifaliana ny fon’ny olona mandray ny Filazantsara ka midera an’Andriamanitra amin’ny feo mahery. Lehibe loatra ny asa nataon’iJehovah. Tsy mahazaka ny Filazantsara ny piavonavona ka te hampangina ny vava midera. «Fa ny Fariseo sasany, izay teo amin’ny vahoaka, nanao taminy hoe: Mpampianatra ô, rarao ny mpianatrao » (Lioka 19:39). Kanefa ny vato no hiantsoantso raha mangina ireo. «Fa Izy namaly ka nanao hoe: Lazaiko aminareo fa raha mangina ireo, dia ny vato no hiantsoantso » (Lioka 19:40). Feno hetaheta ny famonjen’i Jehovah ny fon’izay mihaino ny Filazantsara. Inona ary izao no hataonao? Minoa an’i Jesosy Tompo dia ho vonjena hianao sy ny taranakao. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
FEON’NY FILAZANTSARA ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’ Tél: 22 210 42/034 20 635 53/032 54 635 53/033 15 635 53/ E-mail: lhmmada@gmail.com; Facebook: Feon’ny Filazantsara
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manorata eto ambany. Misaotra indrindra.
Publié parfilazantsaramada novembre 3, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FILAZANTSARA
MENDRIKA NY FAMPAKARA-BADY
Matio 13: 44-50
“Dia tahaka izany no hatao amin’ny fahataperan’izao tontolo izao; hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin’ny marina,” (Matio 13:49)
Harena sarobidy ny fanjakan’ny lanitra. Tahaka ny fofombadin’ny Zanak’Ondry ny olona iray ka tsy maintsy mendrika izany ny akanjo entiny. Akanjo voadio tamin’ny ràn’ny Zanak’ondry. Amin’ny andro farany tsy maintsy hisy ny fanavahana. Izay mitondra fitafiana tsy mendrika ny Zanak’Ondry dia ariana eny ivelany. Eo amin’ny fahavelomana ihany no hahazohana manadio ny fitafiana ho mendrika ny fampakaram-bady. Aoka isika hanararaotra ny andro omen’ny Tompo Andriamanitra antsika fa ratsy izao fianana izao. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao.
Publié parfilazantsaramada octobre 23, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MENDRIKA NY FAMPAKARA-BADY
MINOA NY ASA NATAON’I JESOSY
Perikopa (Jaona 10:23-38)
« Fa raha manao ihany kosa Aho, na dia tsy mino Ahy aza hianareo, dia minoa ny asa, mba ho fantatrareo sy hekenareo fa ny Ray no ato amiko, ary izaho ao amin’ny Ray. » (Jaona 10:38)
Ny Jiosy dia tsy nino ny tenin’i Jesosy. Tsy nino izy fa Jesosy no Kristy. Tsy ondrin’i Jesosy ireo Jiosy ireo satria tsy mihaino ny feony. Mila mihaino an’i Jesosy isika raha te ho ondriny. Jesosy tena Andriamanitra sy tena olona. Mahery amin’ny teny sy amin’ny asa Izy. Sahin’ny Jiosy ny mandà ny teniny. Mila manaraka an’i Jesosy anefa ny ondriny. Tsy mahery amin’ny teny ihany fa mahery amin’ny teny sy ny asa. Aoka hitandrina amin’ny asa noho izany isika ondriny. Hoy ny Jiosy: olona ihany Hianao, nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Jesosy Ray Zanaka ary Fanahy Masina. Jesosy Tompon’ny fahefàna. Tsy ananan’ny Jiosy fahefàna ny hamono Azy raha tsy Izy no manaiky. Mamono an’i Jesosy isika rehefa tsy mino ny teniny. Mino ve Izaho sy hianao fa Jesosy tena Andriamanitra. Mba Ekenareo « fa ny Ray no ato amiko ary Izaho ao amin’ny Ray. » Aza manohitra an’i Jesosy ary forao ny fonao. Aza mafy atoka. Jesosy no Andriamanitra Avo indrindra, Ray Zanaka Fanahy. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
FEON’NY FILAZANTSARA: ‘Manambara an’i Kristy amin’ny firenena … ary mitarika ny firenena ho ao amin’ny Fiangonana’
Email : lhmmada@gmail.com
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao atao dia raisina am-pitiavana. Misaotra indrindra.
Publié parfilazantsaramada octobre 9, 2020 octobre 9, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MINOA NY ASA NATAON’I JESOSY
SINY VAOVAO HO AN’NY DIVAY VAOVAO
Perikopa Marka 2:18-28
«Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta; fa raha izany, ny divay dia hahatriatra ny siny hoditra, ka dia samy ho very foana ny divay sy ny siny hoditra, fa divay vaovao no ho ao anaty siny hoditra vaovao.» (Marka 2:22)
Manana fikendrena ny fifadian-kanina: Dia ny mba ho hitan’i Jehovah. Jereo ny ( Isaia 58:3): «Nahoana izahay no mifady, hoy izy, nefa tsy hitanao? Ary nahoana izahay no mampahory ny tenanay, nefa tsy ahoanao?…». Mbola ao anatin’ny Trinite isika. Ao amin’Andriamanitra Ray, Jesosy, Fanahy Masina. Nifady hanina ny mpianatr’i Jaona sy ny Fariseo. Mba ho hitan’I Jehovah. Ny mpianatr’i Jesosy tsy nifady satria Jesosy mbola eo Izy: «…Raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra, dia tsy mahay mifady izy.» (Marka 2:19). Efa hitan’i Jesosy ny mpianany. Tsy mila mifady. Ny Divay vaovao no atao ao anaty siny hoditra vaovao hoy Izy. Atao mifanaraka ny Divay sy ny fasiana azy. Mila manetry tena ny olona mba ho afaka mandray ny Teny. Fo madio no afaka mandray ny Teny madio. Manao ahoana àry ny fontsika izao? Fo torotoro vonona handray ny fanefena ataon’ny mpamolavola ve no ao anatintsika sa fo miavonavona maniratsira an’i Jesosy? Hoy ny Teny hoe: « Ho torotoro izay miady amin’i Jehovah. » (1Samoela 2:10). Hoy koa ny (Romana 2:5): «Fa ny ditran’ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin’ny andro fahatezerana». Ndao hibebaka. Miverena haingana. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Publié parfilazantsaramada octobre 5, 2020 octobre 5, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur SINY VAOVAO HO AN’NY DIVAY VAOVAO
FANANGANANA NY MATY SY FIAINANA
« Hoy Jesosy taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va hianao? » (Jaona 11:25,26)
Andriamanitra tokoa Jesosy nefa dia tena olombelona koa Izy. Tia an’i Lazarosy telo mianadahy Izy ary ontsa azy ireo. Ny fahafatesan’i Lazarosy dia nentina nanehoana ny voninahitr’Andriamanitra. Toy izao no Fanekem-pinoan’i Marta: «Nefa fantatro fa na dia ankehitriny izao aza na inona na inona hangatahinao amin’Andriamanitra dia homen’Andriamanitra Anao» (Jaona 11 :22). Teo am-bava ihany izany fanekena izany. Tsy nino Marta hoe hitsangana izao ankehitriny izao i Lazarosy. Jesosy no fananganana ny maty sy fiainana. Na dia fitsanganana izao ankehitriny izao aza dia ananany fahefàna. Manao ahoana ny finoako sy ny finoanao? Mino ve isika fa izay mino Azy na dia maty aza dia ho velona indray. Mifonà amin’i Jesosy isika ny amin’ny tsy finoantsika. Jesosy no fananganana ny maty sy fiainana.
Publié parfilazantsaramada septembre 26, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FANANGANANA NY MATY SY FIAINANA
MAHAY MIFIDY NY ANJARA TSARA
Perikopa Lioka 10: 38-42
(Deoteoronomia 6:4-7, Romana 8:18-39, Matio 6:24-34)
“Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro herehina hianao; nefa zavatra iray loha no ilaina; fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy.” (Lioka 10:41,42)
Nampiantrano an’i Jesosy Marta. Nefa tsy nanana fitsaharana ihany izy. Sahirana tamin’ny fanompoana izy fa tsy tamin’ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra ary ny heriny rehetra izany. Eny, naloto fo tamin’I Maria sy tamin’i Jesosy koa aza i Marta. I Maria kosa, teo anilan’ny tongotr’I Jesosy, nihaino ny teniny. Nahay nandray ny fitsaharana. Hoy Jesosy: Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy. Tsy nalaina tamin’i Maria tokoa ny anjara tsara: noraisiny ny fitsaharana nomen’i Jesosy. Nitia an’i Jesosy tamin’ny fony izy. Inona ary no anjara fidinao ankehitriny? Ny ho maro ahiana sy maro herehina ve (naloto fo) sa ny hipetraka eo anilan’ny tongotr’i Jesosy mihaino ny teniny amin’ny fitiavana? Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Publié parfilazantsaramada septembre 18, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MAHAY MIFIDY NY ANJARA TSARA
MIJOROA AMIN’NY FINOANAO
« Rehefa afaka izany, dia hitan’I Jesosy teo an-kianjan’ny tempoly ralehilahy, ka hoy Izy taminy: indro, efa sitrana hianao; aza manota intsony, fandrao hanjo anao ny ratsy noho ny teo » (Jaona 5:14)
Tsy aretina ara-nofo ihany no manjo ity lehilahy ity fa aretina ara-panahy koa. Nalemy izy. Ny fihetsehan’ny rano ihany no ninoany hanasitrana azy ka na dia niteny azy ary Jesosy hoe « Te ho sitrana va hianao? » dia mbola ny firobohana ao anatin’ilay rano ihany no nitokiany fa hanasitrana azy na dia Jesosy Ilay Mpanasitrana aza no miteny aminy. Ny ankamaroan’ny olona dia tsy mahatoky afa tsy ny ezaka ataon’ny tenany. Tsy mahatsiaro ny Fahasoavana Lehibe dia ny fisian’i Jesosy eo akaikiny. Fahajambana ara-panahy izany. Mahasitrana ny mihaino sy mino ny tenin’i Jesosy: « Mitsаngàna, ento ny fandrianao, ka mandehana. » (Jaona 5:8). Tsy niahanahana intsony izy na niady hevitra fa tonga dia nihaino ny Tenin’i Jesosy. « Niaraka tamin’izay dia sitrana ralehilahy dia nitondra ny fandriany dia lasa nandeha… » (Jaona 5:9). Aoka isika tsy Hiahanahana na ho be ady hevitra rehefa miteny Jesosy fa hino Azy dia ho sitrana. Mila maharitra amin’ny finoana isika. Rehefa sitrana izy dia nitondra ny fandriany dia lasa nandeha. Ka izy nitondra ny fandriany iny no nisy Jiosy nahita azy ary nandrara azy tsy hitondra fandriana amin’ny andro sabata. Tsy nanaiky ireo Jiosy ralehilahy fa namaly hoe Ilay nahasitrana ahy no nanao tamiko hoe Ento ny fandrianao. Sahy mijoro amin’ny finoantsika tahaka an’ ity lehilahy ity ve isika ka na dia iharan’ny fandraràna na eso na latsa aza dia sahy mijoro amin’ny finoana an’i Jesosy? Indro efa sitrana hianao; aza manota intsony, fandrao hanjo anao ny ratsy noho ny teo. Jesosy Kristy Tompo mampahery anao
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia “soraty am-pitiavana eto ”. Misaotra.
Publié parfilazantsaramada septembre 12, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MIJOROA AMIN’NY FINOANAO
FITIAVANA NY FAHAVALO
« Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an’izay manenjika anareo. » (Matio 5:44)
Tian’i Jesosy hanahaka Azy ny olony. Io no asa nataon’i Jesosy tety an-tany. Nanaiky hitondrafamonjena ho an’izao tontolo izao Izy. Ny mpanota (fahavalony) mibebaka no ekeny ary avelany ny fahotany. Nanaiky ho faty Izy mba hahatanteraka ny “Ilay Zanak’ondry manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao”. Jehovah Andriamanitra mampiposaka ny masoandrony amin’ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Tian’i Jesosy ho tahaka ny Ray isika. « Koa amin’izany aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo izay any an-danitra” (Matio 5:48). Tsy vitantsika anefa izany. Hoy Paoly: “Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, dia ato amin’ny nofoko; fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny hahatanteraka ny tsara no tsy ato” (Romana 7:18). Soa ihany fa teo Jesosy Ilay Filazantsara mahafinaritra. Ny marina maty hamonjy ny tsy marina. Fa izay tsy hain’ny lalàna satria ny nofo no nahalemy azy dia vitan’Andriamanitra tamin’Izy naniraka ny Zanany. Soa lehibe ho antsika ny hanesoran’i Jesosy ny otantsika raha mibebaka marina isika. Koa mibebaha ary fa efa akaiky ny fanjakan’Andriamanitra.
Publié parfilazantsaramada septembre 5, 2020 septembre 5, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FITIAVANA NY FAHAVALO
NY FAHASOAVAN’I JESOSY KRISTY TOMPO
“Koa ataovy tsara ny hazo mbamin’ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mbamin’ny voany; fa ny voany no ahafantarana ny hazo.” (Matio 12:33)
Ny voany no ahafantarana ny hazo: ny voan’ny hazo mbola eny amboniny no tena vokatra ara-boajanahary ahafantarana ny azy. Oharina amin’ny hazo isika. Inona no vokatra azo antenaina amiko sy aminao? Mahavelona ny hafa ve sa mamono ny hafa ny teny avy amiko sy avy aminao? “Ny vokatry ny Fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonampo. Tsy misy lalàna manohitra izany.” (Galatiana 5:22,23). Ny rakitra tsara no amohan’ny olona tsara fanahy zavatra tsara. Ny Fahasovan’i JesosyKristy ao anatin’ny mino no amoahany fiainana ho an’ny manodidina azy. Ny rakitra ratsy kosa dia amohan’ny olona fahafatesana ho an’ny manodidina azy: Dia ny asan’ny nofo: Fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ….Fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra. Ampamoahina isika ny amin’ny andro fitsarana.
Raha nanohina anao ity toriteny ity na misy fanamarihana manokana tianao hatao dia manasa anao hanoratra izany eto. Misaotra indrindra tompoko.
Publié parfilazantsaramada août 28, 2020 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NY FAHASOAVAN’I JESOSY KRISTY TOMPO
Articles plus récents 1 2 3 4 5 … 64 Articles plus anciens